Imizobo encinci ephefumlelweyo ye-movie kaClaudia Maccecchini | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lakho Igama UClaudia Maccechini (uClaudym), igcisa laseNtaliyane elithanda ukubonisa imifanekiso ye inkcubeko yepop kwiiMicrodetails. Kukho umhlaba ongaphakathi kwizinto ezincinci, kwaye esi sesona sizathu sokuba abe ngumlandeli wezinto kunye nezifundo ezenziwe kwinqanaba elincinci.
Uyathanda iinkcukacha ezincincikodwa zihlala zingahoywa ngenxa yamehlo angxamisekileyo wombonisi. Ugqibe kwelokuba enze izithombisi kuqala njengomnqweno, kodwa wayefuna ukumema abantu ukuba bahlale emfanekisweni kwaye bajonge ngokwenene. Imizobo eyenziwe idityaniswe inkcubeko yepop- Umxholo onesisa onika uluhlu olubanzi lwezihloko ezinomdla kwizithonjana zakho.
I-repertoire yam iqulethe imizobo evela kwiimuvi zakudala ezinje "Idabi leenkwenkwezi", "Buyela kwikamva", "ET", "INkosi yamakhonkco", "Uharry Potter"njl ... Ukuphefumlelwa kuhlala kuvela kwiimuvi endikhe ndazibukela ngokutsha. Nje ukuba ndifumane umfanekiso ondikhuthazayo, ndiqala ngesiseko sepensile, kwaye kamva ndisebenzise ii-watercolor ezindivumelayo ukuba ndibambe iimilo ezithile kunye nevolumu. Emva kokufudukela kwiipensile ezinemibala ukwenza iinkcukacha zokugqibela zincinci. Ihlala indithatha nge-6 okanye iiyure ezingaphezulu ukugqibezela isiqwenga.
Nantsi igalari ngezona miniji zayo zintle ezenziwe ngu UClaudia MaccecchiniNdiyathemba uyabathanda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizobo encinci ephefumlelweyo ka-Claudia Maccecchini
I-comic yomdlalo wevidiyo kaZac Gorman